I-Lucidchart: Hlanganyela Futhi Ubone Ngeso Lengqondo Ama-Wireframe Akho, Amashadi e-Gantt, Izinqubo Zokuthengisa, Okuzenzakalelayo Kokuthengisa, Nohambo Lwekhasimende | Martech Zone
Ukubona ngeso lengqondo kuyadingeka uma kukhulunywa ngenqubo eyinkimbinkimbi. Kungakhathaliseki ukuthi iphrojekthi eneshadi le-Gantt ukunikeza ukubuka konke kwesigaba ngasinye sokuphakelwa kobuchwepheshe, ama-automation wokumaketha aconsa ukuxhumana komuntu siqu kumuntu ongase abe umuntu noma ikhasimende, inqubo yokuthengisa ukuze ubone ngeso lengqondo ukusebenzisana okujwayelekile enqubweni yokuthengisa, noma ngisho nomdwebo nje bona ngeso lengqondo uhambo lwamakhasimende akho… ikhono lokubona, ukwabelana, nokuhlanganyela enqubweni kuyisinyathelo esibalulekile enqubweni yokucabanga neyokusebenzisa.
Iminyaka eminingi, lokhu kwenziwa nge-software yedeskithophu eqinile efana ne-Visio, noma kwenziwa nje ngethuluzi lokwethula elifana ne-Powerpoint. Kodwa-ke, isoftware yedeskithophu ayinikezi izindlela zamaqembu akude, izinsiza, namakhasimende. Ngena Lucidchart, uhlelo lokusebenza lomdwebo olusekelwe emafini oluhlanganisa amaqembu ndawonye ukuze enze izinqumo ezingcono futhi akhele ikusasa.
I-Lucidchart Visual Workspace
I-Lucidchart iyindawo yokusebenza ebonakalayo ehlanganisa umdwebo, ukubonwa kwedatha, nokusebenzisana ukuze kusheshiswe ukuqonda nokushayela ukusungula izinto ezintsha. Ngalesi sixazululo esihlakaniphile, esisekelwe emafini, noma ubani angafunda ukusebenza ngokubonakalayo nokusebenzisana ngesikhathi sangempela ngenkathi akha ama-flowchart, ama-mockups, imidwebo ye-UML, nokuningi.
With Lucidchart, abantu ngabanye namaqembu angakwazi ukwenza imephu yemidwebo kalula ngezifanekiso zenqubo evamile. Izinzuzo zesikhulumi zihlanganisa:
Dala umbono owabiwe - Bona ngeso lengqondo izinqubo zeqembu lakho, izinhlelo, kanye nesakhiwo senhlangano. Ukudweba okuhlakaniphile kukuvumela ukuthi ubone ngeso lengqondo imibono eyinkimbinkimbi ngokushesha, ngokucace nangokuhlanganyela ngokwengeziwe.
Thola wonke umuntu ekhasini elifanayo - Ulimi olujwayelekile olubonakalayo lusheshisa ukubambisana futhi luthuthukise ukuxhumana. Ithuluzi liza nenguqulo, ukuphawula okuqondene nomumo othize, ingxoxo engaphakathi komhleli, ukubhala ngokuhlanganyela kwesikhathi sangempela, izikhombisi ezihlanganyelwe, nezaziso.
Yenza izinhlelo ziphile - Lucidchart ikuvumela ukuthi uhlale ugxilile futhi ugijimele phambili ngenjongo. Philisa izinhlelo ezizothuthukisa ibhizinisi lakho.
Inkundla iyinqolobane yedokhumenti elungele ibhizinisi ehlangana nayo Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle, Microsoft, Atlassian, Slack, nokuningi.
Uhlelo lokusebenza luqinile kangangokuthi ngizolusebenzisela ukwenza i-wireframing futhi. Baphinde banikeze amandla okwengeza amashadi enhlangano, ama-mockups e-iPhone, imidwebo ye-UML, imidwebo yenethiwekhi, amamephu engqondo, amamephu esayithi, imidwebo ye-Venn, nokuningi.
I-Lucidchart isisiza sixazulule izinkinga eziyinkimbinkimbi ngokudala imidwebo yezakhiwo nama-flowchart adala ukucaca futhi asize ithimba lethu elisabalalisiwe ukuthi lisukume lisheshe ngokushesha ku-codebase namasistimu. … Ivumela amalungu eqembu amaningi ukuthi asebenzisane ngesikhathi esisodwa, okwenza kube lula ukusebenza eqenjini elisatshalaliswe ngokugcwele.
Ukuqalisa kulula futhi kunenqwaba yezinsiza esiteshini sabo se-YouTube uma ungathanda ukuqalisa ngokusebenzisa inkundla. Inkundla futhi inezinhlelo zokusebenza zeselula nethebhulethi ku-iOS ne-Android.
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- Ishadi likaLucid futhi ngisebenzisa leso sixhumanisi kulesi sihloko kanye nezinye izixhumanisi ezihambisanayo.
Tags: ngokubambisanaUkuhamba kwamakhasimendeimidwebo egelezayoukugelezaishadi le-ganttlucidchartizinqubo zemephuukuzenzekelayo kokuzenzekelayoukuthuthaukugeleza kwenquboinqubo yokwenza imephuinqubo yokuthengisaukusebenzisana kweqembuImidwebo ye-UMLindawo yokusebenza ebonakalayoindawo yokusebenza yokubukaama-wireframes